Isikhumulo sezindiza "Tolmachevo" (Novosibirsk) - iphuzu elibaluleke kakhulu ebalazweni Russia
Futhi hlobo luni zokuthutha uthanda ke? Ayephila nesitimela ejabulisayo? Relaxing futhi ngokushelela noma ngokuhambisa on shumbi kwamanzi? Futhi mhlawumbe, kuyashesha futhi ngokushesha modernizes izindiza?
Uma uthanda indlela wesibili yezokuthutha, khona-ke ngeke sikwazi lokho amagama zezindiza main kokubili ezweni lethu kanye nasemhlabeni jikelele wonkana.
Isikhumulo sezindiza "Tolmachevo" (Novosibirsk) - ethandwa emoyeni esangweni Russia
Abalandeli abajikelezayo njengoba izivakashi, futhi abakhileyo zabomdabu umuzi omkhulu yezwe, eyaziwa kahle futhi wayithanda le Yiqiniso, obalulekile zokuthutha iphuzu. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba sezindiza e Novosibirsk, ngokuthi "Tolmachevo", unedumela kahle sifaneleka wokuba omunye izikhungo elikhulu air zokuthutha eRussia. Ngaphezu kwakho konke, ku Russian Federation ongowakhe unendawo ehloniphekile sesithupha uhlu zezindiza ephezulu umgibeli traffic.
Kufanele kuqashelwe ukuthi leli phuzu, kokuba isimo ngamazwe, kwaphela iminyaka eminingi manje uxhuma eYurophu nase-Asia. Izinsizakalo ezisemqoka ezilungiselelwe kule amazwe CIS, Thailand, Japan, South Korea, eJalimane, Bulgaria, Turkey, United Arab Emirates.
Yingakho umsebenzi lo Airport yazuza ukubaluleka yombuso kanye linendima ebalulekile ekuthuthukisweni komnotho we laseSiberia Federal District. Amasevisi kwesikhumulo sezindiza "Tolmachevo" nsuku zonke zisebenzisa hhayi kuphela izakhamuzi Novosibirsk region, kodwa futhi eKemerovo futhi saseTomsk izifunda kanye Altai Territory. Emazinga we omkhulu ihabhu yezokuthutha: ezindizeni yasekhaya - abantu 1,800 ngehora, ngamazwe - abantu 750.
"Tolmachevo" Isikhumulo sezindiza (Novosibirsk). Intuthuko wamaqhawe
Kuze kube manje, kulesi sikhumulo yesimanje kakhulu futhi yesimanje ufana kancane ukuze ishashalazi lezindiza zempi, ezakhiwe iziboshwa ngo-1941, nakuba kuba isimo esinjalo ke sekuneminyaka iminyaka engaphezu kwengu-10.
Kwakungenxa nje ngo-1957 we "Tolmachevo" le indiza yokuqala kwesokunxele enhlokodolobha. Kwakuwusuku Tu-104, futhi ebhodini babe abantu 50. Julayi 12, 1957 ... Lolu suku abalulekile futhi kwaba usuku lwakhe lokuzalwa olusemthethweni.
Kwakuba eziningi nezinye izikhathi esimnandi umlando kulesi sikhumulo, isibonelo, abasebenzi siyaziqhenya ukubika ukuthi izikhathi lapha eziningana lawela ukuze ifake uphethiloli edume izindiza French "Concorde".
Kodwa kuye kwaba nezenzakalo ebulalayo. Ngakho, ngo-1978, ngokusebenzisa iphutha master abasishaya indiva imithetho yokuphepha, kwaba khona umlilo, okwaphumela kuphela izinsalela angqongqa nomsila omkhulu we Tu-154. By the way, waqhubeka ube zasesiteji umxhwele futhi zithandwa kakhulu ukuthwetshulwa eziningi. Kwaba ababukeli bakhe wabona "Crew" ifilimu.
Kuhlelwa Kabusha ukuthi emhlabeni eRussia eminyakeni 90, ayikwazanga kodwa kuthinta futhi kule ndawo. Nokho, ikheli sezindiza "Tolmachevo" (Novosibirsk) ayikashintshi, kodwa isigaba united, esasihlanganisa eziyinkimbinkimbi sezindiza, baphela endaweni yawo wasuka izinhlangano ezintathu ezihlukene.
Wayephila ngesikhathi neenkhathi ezibudisi, ekwindla ka-1992 "Tolmachevo" wathola isimo omhlaba kanye, ngenxa yalokho, Namanje lisasebenza.
"Tolmachevo" Isikhumulo sezindiza (Novosibirsk). Yini ongayilindela esikhathini esizayo esiseduze?
Njengoba isikhathi siqhubeka, izinto zishintshe, futhi sine-giant ezifana isikhumulo sezindiza "Tolmachevo" abadinga ukulungiswa sina kanye sesimanje. Ngokusho kohlelo target "Development zokuthutha simiso Russia (2010 - 2020 iminyaka)," ekupheleni 2014 sihlelwe kabusha sezindiza "Tolmachevo".
It is kuhlelwe ukuba balungise evulekile, ukuze ithuthukise uhlelo lokulawula amanzi futhi amanzi ethatha, ukwakha wokutakula isiteshi esisha. Ngaphezu kwalokho, ubuyekeze uphinde zokuvikela lobuchwepheshe. Khulisa onogada basesikhumulweni sezindiza - ingenye imisebenzi ebaluleke kakhulu.
Ngemva kabusha, kungenzeka-ke kuzokhulisa kuphela. Futhi sezindiza "Tolmachevo" (Novosibirsk) liyohlale linendawo emakhulwini ezinkulungwane zabantu abakhetha indiza njengoba ifomu esheshayo futhi yesimanje kakhulu kwezokuthutha.
Novy Urengoy Isikhumulo sezindiza: Umlando kanye yesimanjemanje
Isikhumulo sezindiza "North" (Novosibirsk): ikhumbule inkazimulo yangaphambili
Ngazi kanjani isimo ukundiza "Transaero"?
Murmansk Airport - emoyeni lomasango elikhulu Russian Arctic
EKhabarovsk Airport - emoyeni ihabhu elikhulu eMpumalanga Ekude
"Airlines Domodedovo": isiqondiso indiza, indiza zesifazane, isithombe, ukubuyekezwa
Ama-generator e-petroli: ukubuyekezwa, izinzuzo nokungalungi
Lijikeleziswe ngezandla zabo version elula
Empambana emgqeni okuqinile - umthetho nesijeziso ukwephulwa yayo
I metro station "Zvenigorod" Petersburg
Tsitramon - ukunyuselwa noma kuyancipha ingcindezi?
Ngiyinika kanjani ukushintsha ifonti ku siqoqelalwazi (Esadleni sakho se-Windows 10): amasu eziyisisekelo ezimbalwa
Moscow - incazelo umzila Larnaca, isikhathi indiza
Inkinga ye ethnogenesis esempumalanga lwamaSlav, noma kungani zikhona izindawo elingenalutho emlandweni wethu?
Izigqoko imfashini kwabesifazane. Indlela ukukhetha umnqwazo imfashini